ဗွီဒီယိုမော်ကွန်း - ထို rayhab
20 ဆောက်လုပ်ရေး။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုမက်ဒီနာစတင်ခဲ့သော Hejaz မီးရထား, ရထားဘူတာ, Sultan II ကိုရပ်လိုက်နိုင်သည်။ အဗ္ဗဒူဟာမစ်ကမက်ဒီနာအတွက်တည်ဆောက်အထိမ်းအမှတတစ်ခုဖြစ်သည်။6မွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ဘဏ္ဍာရေးပံ့ပိုးမှုများဖြင့်တထောင်အနည်းငယ်ကီလိုမီတာ rails အကြောင်းကိုအားလုံးအဆီးအတား, နေသော်လည်း [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းခွန်ကောက်လမ်းကြောင်းနှင့်စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်: အဆိုပါအချက်တူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်း၏တဦးတည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Aegean နှင့် Marmara ယခုပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကားလမ်းဒေါင်းလုပ်အဆိုပါ93 နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲနာရီအကြားအစ္စတန်ဘူလ်-Izmir [ပို ... ]
Approved အစ္စတန်ဘူလ် Izmir ကားလမ်းကိုစမျးသပျ! 3,55နာရီ Continues မဟုတ်
Izmir နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ကြားအကွာအဝေးအသစ်ကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးသတင်းစာဆရာ Timur Akkurt download, 3,5 နာရီကိုစမ်းသပ်ဖော်ပြထားသည်။ Akkurt ရဲ့ကလုပ်နေတာအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တူရကီ Yandex Maps ကိုလျှောက်လွှာထဲမှာပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးအညွှန်းစနစ်များလမ်းစမ်းသပ်ခြင်းတဦးတည်း [ပို ... ]
Babadag Ropeway စီမံကိန်း
ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားသည့်အခါဥရောပရဲ့အကြိုက်ဆုံးလေထီးစီးခြင်းဧရိယာ Babadag ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုယခုနှစ် 2020 အတွက်ပြီးစီးဘို့စီစဉ်ထားသည်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ စီမံကိန်းကိုပစ်ချတစ်နှစ်သန်းသြဂုတ်လ 2017 1 အတွက်တစ်နှစ်အခြေခံမှဧည့်သည်များထိပ်သီးအစည်းအဝေး Fethiye ပါဝါအစည်းအရုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းသယ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်နေသည် [ပို ... ]
2019 အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထားမြေပုံ: မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူယခုနှစ် 2030 အဆုံး 776 နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လာမည့်နှစ်တွင်စတင်မည်နယူးယောက်မြို့ပြီးနောက်ရှည်လျားလိုင်းများကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအရှည်ဆုံးမြေအောက်ကွန်ယက်ကိုအတူမြို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကီလိုမီတာ။ မာစတာ [ပို ... ]
Izmir ကားလမ်းမှအစ္စတန်ဘူလ်ဖွင့်လှစ်: အစ္စတန်ဘူလ် Izmir 3.5 ကုမ္ပဏီကြီးအစ္စတန်ဘူလ် Izmir အကြားအချိန်ကိုအတိုကောက်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စီမံကိန်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသစ်ကိုကားလမ်းကဏ္ဍများကိုဖွင့်လှစ်။ Edremit လမ်းဆုံ - - ပုဒ်မSaruhanlıနှင့်အတူ Izmir လမ်းဆုံဆောက်လုပ်ရေးBalıkesirပြီးစီး [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုတွင် Task ဒေသများ
စီမံကိန်းများ၏ Starting Point သို့ Gebze ၌တည်ရှိ၏, Izmit ဂလားပင်လယ်အော်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏အလျားအကြားတည်ရှိသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3ကီလိုမီတာရပ်ဆိုင်းမှုတံတားနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ် viaducts မှတဆင့် Dilovasi ဟာဇီဂိုဗီးနားနှာခေါင်းဖြစ်နှင့်နီးစပ် Gemlik Orhangazi ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
အနောက်လမ်းဆုံနှင့်အတူ Balikesir Akhisar လမ်းဆုံနှင့်အတူအဝေးပြေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအထွေထွေညွှန်ကြားမှုများနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ22019 သည့်တရားဝင်ပြန်တမ်းရက်စွဲပါသြဂုတ်လကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေငြာထားပါတယ်ကြေညာခဲ့သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏အစိတ်အပိုင်း Gebze-Orhangazi-Izmir နေဖြင့်ကန်ထရိုက်ခဲ့ပါတယ်, အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ် "Build-Operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
Marmaray ပျံသန်းမှု Duration: ဆက်လက်အတွက် Bosphorus နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ရထားလမ်းချိတ်ဆက်တံ့သော Marmaray စီမံကိန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အလုပ်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားအောက်မှာဖြတ်သန်းမီးရထားလိုင်းများ, ရထားလမ်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကွန်နက်ရှင်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ Marmaray လေ့လာရေးခရီးများနှင့် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Metrobus လိုင်း Metrobus ဘူတာက Metro ဘူတာအမည်များ: အစ္စတန်ဘူလ်က Metro နှင့် Metrobus Lines (လက်ရှိ), Avcılar Metrobus, ရထားစနစ်များ, Aksaray - Metrobus ရပ်သစ်ကိုလိုင်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစီစဉ်ထား [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် Izmir အဝေးပြေးလမ်းကြောင်း
အစ္စတန်ဘူလ် Izmir အဝေးပြေးလမ်းကြောင်း: 192 နိုင်ငံတော်သမ္မတ: Marmara ဒေသ, Aegean ဒေသကြီး, အနောကျပိုငျးမြေထဲပင်လယ်နှင့်ချိတ်ဆက်အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်အနောက်တိုင်း Anatolia အစ္စတန်ဘူလ် Izmir ကားလမ်းဟာ 4.8.2019 တနင်္ဂနွေ 16 ၏ 00 ကီလိုမီတာနောက်ဆုံးအပိုင်းပြီးစီးပုဆိန် [ပို ... ]
အဇာဘိုင်ဂျန်မှစလှေတျတျောခံရဖို့ Sivas ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon ထုတ်လုပ်
Sivas ထုတ်လုပ်ကုန်တင်လှည်းအဇာဘိုင်ဂျန်မှစလှေတျတျောကိုခံရပါလိမ့်မယ်။2သည့်ရှေ့ပြေးပုံစံများအတွက်ကုန်တင်ကားများထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်လျှင် 600 ကားများထုတ်လုပ်ထားရန်။ ကTÜDEMSAŞထုတ်လုပ်စမ်းသပ်မှုကားများဖြတ်သန်းခဲ့လျှင်အဇာဘိုင်ဂျန်ထံမှ 36 သန်းဒေါ်လာရရှိသောလိမ့်မည်။ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Mehmet TÜDEMSAŞ [ပို ... ]
ဆော်ဒီအာရေဗျရထား hyperloop ဖို့သဘောတူ
ဆော်ဒီအာရေဗျ, hyperloop ရထားပြွန်လေ့လာမှုများဦးစားပေးများတွင်ဗာဂျင်း hyperloop တစ်ခုမှာကုမ္ပဏီမှစတင်ခဲ့သည်။ ဒီစနစ်နှင့်အတူကနာရီရထားစီး 10 76 မိနစ်လျှော့ချလိမ့်မည်။ Hyperloop သောမျိုးဆက်သစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏တဦးတည်း၏အသွင်အပြင်တို့နှင့်အတူကြွအကြံပြုခြင်း, အနာဂတျမှာလေ့။ ဒီဆန်းသစ် [ပို ... ]
ဆွဲလျှပ်စစ် Pickup Wagon ရထား၏ Ford ကားက F-150 570 တန်ချိန်
အစွမ်းသတ္တိ၏ပြပွဲလုပ်လျှပ်စစ်ယာဉ်များ၏လေယာဉ်တင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဆွဲရှေ့မှာနီးပါးဖက်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့က Mini ကို Cooper က၏လျှပ်စစ်ဗားရှင်းကိုမြင်လျှင်လတ်တလောသာဓက။ အလားတူကြော်ငြာစီမံကိန်းများကိုလည်း Ford ကနေရောက်လာတယ်။ လျှပ်စစ်က F-150 570-တစ်တန်ပစ်ကပ်ရှေ့ပြေးပုံစံ [ပို ... ]
Metro နိုင်ငံသားရဲ့အကူအညီကနေလူနာများတွင်ပေါက်ဖွားလာ IMM န်ထမ်း
ရုတ်တရက် IMM ရဲ့န်ထမ်းများတွင်အလားတူနှင့်Kısıklıဘူတာများတွင်ခရီးသွားလာနေစဉ် Umraniye Çekmeköyမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုနိုင်ငံသားများမြေအောက်ရထားထဲမှာချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားကူညီပေးသည်။ နေမကောင်းခရီးသည်အာဗြဟံသည် Ulgen မှပထမဦးဆုံးအကူအညီမှာလုံခြုံရေးအစောင့်, နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့သညျ။ အတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး်ထမ်းဆောင် [ပို ... ]
အီမိုဂျီနေ့နှင့်အတူ Ford ကားကမ္ဘာ့ဖလားအီမိုဂျီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Pick-Up ကိုပွဲပြုလုပ်
Ford ကား (ယူနီကုဒ် Consortium), အယူနီကုဒ် Consortium "Pick-Up ကို" ကအတည်ပြုစာရင်းကိုအသစ်ရုပ်ပြောင်သူတို့ရုပ်ပြောင်ကိုထည့်သွင်းဖို့ရှာသောကြေညာခဲ့သည်။ Ford ကားသစ်တစ်ခု "Pick-Up ကို" ရုပ်ပြောင်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, အီမိုဂျီအကဲဖြတ်အတည်ပြုသည့်ယူနီကုဒ် Consortium အားဖြင့်တိုတောင်းသောစာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ 100 [ပို ... ]
YHT Baggage စည်းကမ်းများ
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတို့ရွေးချယ်မှု၏ခရီးသည်ခြမ်းခန့်ပို့ဆောင်သအိတ်ကိုသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမှ TCDD YHT ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကြိုတင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ငြိမ်းချမ်းသောခရီးအဘို့အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျပိုလျှံအိတ်ကိုသယ်ဆောင်လျှင်သင်မှာလည်းရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုခံယူနိုင်ပါတယ်။ [ပို ... ]
ဒူဘိုင်းအယ်လ် Maktoum 2020 အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဖွင့်လှစ်
အယ်လ် Maktoum အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (IATA: DWC, ICAO: OMDW) ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ယူအေအီးစော်ဘွားနေရာအပိုင်းအခြားအတွင်း။ ဒူဘိုင်းမြို့လယ် 37 ကီလိုမီတာ။ အဆိုပါ Jebel Ali ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သော, လေဆိပ်တွင်တည်ရှိသည်တည်ရှိသောအနောက်တောင်ဘက်, [ပို ... ]
အဆိုပါဂုဏ်သိက္ခာပထမဦးစွာဆုအပေါ် DKM ဆောက်လုပ်ရေး
ဥရောပယူနီယံစီမံကိန်းကိုအောက်မှာပေါ်ထွက်လာသော "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေရှည်တည်တံ့သောအဆောက်အဦးစာတမ်းဖတ်ပွဲ (International က sustainablebuildingssymposi ငါ-ISBS)" စတုတ္ထဎ, Dallas ရှိ 18-20 ဇူလိုင်လ 2019 တက္ကဆက်ပြည်နယ် / အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, တူရကီတက္ကသိုလ်, Gazi တက္ကသိုလ်, တက္ကဆက် Tech မှတက္ကသိုလ်, တက္ကဆက် တစ် & M တက္ကသိုလ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းမှာလုပ်ငန်းစု, ဗိသုကာပညာရှင်များအမေရိကန်အင်စတီကျု (ဗိသုကာပညာရှင်များ AIA-americanınstitut [ပို ... ]
က Wagon ကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်
ဘယ်လိုကားများ LEGIOS, ရထားလမ်းလှည်းများနှင့်စက်ခေါင်းထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်ရန်ပြုပြင်ရေးနှင့်ဥရောပထိပ်တန်းလုပ်တဲ့စက်ခေါင်း၏ခေတ်မီအတွက်အတွေ့အကြုံရှည်လျားနှစ်ပေါင်းရှိသည်ဖို့တစ်ရထားလမ်းကုန်တင်ကားများနှင့်အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ LEGIOS, ရေတွင်း, ပလက်ဖောင်းလှည်း, တံဆိပ်ခတ်အောက်ခြေလှည်း [ပို ... ]
ရထားလမ်းကူးသူသံလမ်း၏ediliyor.üstပြုပြင်သူနဂိုအတိုင်းရထားလမ်းနှင့်ထိုသို့ဂရုစိုက်နှငျ့သငျအတော်လေးအံ့သြသွားလိမ့်မယ်သူကိုအလုပျသမားမြား၏စိန်ခေါ်မှုအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ရပ်နေကြ၏ဘယ်လောက် farketmeyiz.litvanya စဉ်းစားတစ်စုံတစ်ဦးထံမှကမ္ဘာ့အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများအလုပ်အကိုင်များသောင်မတင် .. အလားတူပုံရိပ်တွေမီးရထား [ပို ... ]
TCDD ၏Çorluနှစ်မြောက်ဗီဒီယို '' ကျနော်တို့မေတ္တာကိုရရှိစေ ''
Çorluကို 'ကျနော်တို့ဆောင်ကြဉ်း Love' 'ကနေတူရကီပြည်နယ်မီးရထားရထားဘေးဥပဒ်ကိုတွစ်တာအကောင့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူဗွီဒီယိုတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဖြစ်ဆိုးရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မိသားစုများအပေါ်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုတုံ့ပြန်။ လူရာပေါင်းများစွာကသူတို့ဘဝတွေကိုရထားဘေးအန္တရာယ်များ၏တူရကီ Corlu နှစ်ပတ်လည်နေ့ဦးဒဏ်ရာရလူတွေ 25 ဆုံးရှုံးခဲ့ရ [ပို ... ]
Izmir ထံမှတူရကီ '' အပြာရောင် '' ခရီးမှ
သာယာလှပအမြင်များ, သူတို့ရဲ့ပိုမိုနှစ်သက် Izmir တူရကီအပြာရောင်ရထားဘို့တတ်နိုင်နှင့်နှစ်သိမ့်, မြို့၏36, ဧည့်သည်များ 43 ကိုရပ်တန့်သွားအတူလမ်းကြောင်း။ သာယာသောခရီး 14,5 နာရီပြီးစီးခဲ့သည်။ တချို့ကသာအခြားသူများကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့စျေးပေါများမှာ [ပို ... ]
မောင်းသူမဲ့မီထရိုနဲ့ signal စနစ်များ
မောင်းသူမဲ့မက်ထရိုအစ္စတန်ဘူလ်Üsküdar-Ümraniyeမက်ထရိုလိုင်းအတွက်ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်မကြာခဏကြားရကြပြီဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။ အဘယ်အရာကိုဘယ်လိုမောင်းသူမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်လမ်းအတွက်အဲဒီကိရိယာစေသည်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ကျနော်တို့ကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ မြေအောက်ကားရာထူးနှင့်လှုပ်ရှားမှုဦးတည်ချက်နှိုးဆော်သံစနစ်များ [ပို ... ]
မြှင့်တင်ရေးနေ့ရက်များအရှေ့တောင် Anatolia အတွက်စတင်ဖြစ်ရပ်မှန် ih လယ်ထွန်စက်
ဖြစ်ရပ်မှန် ih, Anatolia အတွက်လယ်သမားကစီစဉ်အရှေ့တောင်လယ်ပြင်ဖြစ်ရပ်များ, တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကို semi-automatic ဂီယာအုံလယ်ထွန်စက်နှင့်အတူတတ်၏။ စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာများမြှင့်တင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အရှေ့တောင်အတူ 25 ဇွန်လ 2019- TürkTraktörသီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ရပ်မှန် ih လယ်ထွန်စက် [ပို ... ]